Haweenka qaranka oo dhiira galiyay isbadalka dumarka ay sameynayaan —lagu daray sawiro | somalinwo.com
Haweenka qaranka oo dhiira galiyay isbadalka dumarka ay sameynayaan —lagu daray sawiro
Published on April 1, 2015 by Admin · No Comments
Munaasabada ka dhacdhay magaalada mudisho ayaa waxaa isugu yimid haween ka socday ururada bulshada rayidka fanaaniin ,haween qurba jog, ah ururka haweenka qaranka iyo dumar ganacsato ah oo munaasabadda lagu cazuumay hadafka loo sameeyay munaasabadda waxa ay aheyd in lagu furo xarun dumarka lagu baro habka qurxinta.
Munaasabadda furitaanka xarunta barashada qurxinta dumarka waxaa ka hadlay haween ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshad ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadashay haweenay lagu magaacbo Caasho oo ka mid ah qurba joogta soomaalida ,waxa ay sheegtay in ay wanaagsan tahay sameynta goob ay dumarka ku bartaan habka loo qurxiyo hablaha kale .
Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey gudoomiyaha urur ka shaqeeya sidii haweenka la isugu keeni lahaa waxa ay tiri waxa aan dhiira galinayaa in haweenka ay sameystaan goobo ganacsi sidoo kale waxa ay tilmaamtay in ay wanaagsan tahay in haweenka ay mid ahaadaan oo ay siyaasadda iyo arimaha hormarinta ay shaqeeyaan.
Canab Maxamed Cosoble xoghayaha guud ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo hadashayna waxa ay tiri waan ku faraxsanahay in magaalada muqdisho laga furo goobo haweenka lagu qurxiyo .
Deeqa Luul oo ah haweenayda ku fikirtay in magaalada muqdisho ay ka hirgaliso xarumo dumarka lagu qurxiyo ayaa sheegtay in goobtan ay bilaaw u tahay goobo badan oo la doonayo in dumarka ay isku qurxiyaan.
Gabo gabada munaasabadii furitaanka xarunta barashada habka dumarka loo qurxiyo ee Asli Pure Foundation waxaa ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheikh Axmed Gabale waan soo dhaweynaynaa habka ay hawsha u bilaawday Deeqa Luul oo ah gudoomiyaha Asli Pure Foundation
Waxa ay xarunta ka mid noqonaysaa xarumaha loogu tala galay in haweenka lagu baro habka qurxinta dumarka .